QISO QOSOL BADAN oo nin iyo naag ku dhex qabsatay Wiish ay saarnaayen | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada QISO QOSOL BADAN oo nin iyo naag ku dhex qabsatay Wiish ay saarnaayen
QISO QOSOL BADAN oo nin iyo naag ku dhex qabsatay Wiish ay saarnaayen
Bulsha:- Waxaa Maanta idiin soo gudbineynaa qiso gaaban oo Muujineyso Qosal iyo Layaab Kasoo Markaa aqrisato Kugu Abuurayay Amakaag iyo Layaab.
Malaayiin Qofood ayaa waxaa aay arrintaani Ku tilmaameen Qosalka Aduunka iyadoona cid kasta oo dawataa ay ku dhalaneyso in uu maanta oo dhan qoslo ilaa inta aay xasuustiisa ku jirto.
Dhacdadaani ayaa waxaa uu ku saabsanyahay nin labisnaa oo wiish saarna oo gabar lasoo kortay.
Gabadha ayaa waxay ahayd mid daahsan oo socotay goob lagu dabaasho kor waxay ka qabtay dhar caadi ah hoosna dharkii dabasha markii wiishkii usoo dhawyahay meeshii dabaasha ayay waxay iska bixisay dharkii kor ay qabtay ninkiiina intuu kala badbadatay ayuu waxa uu maleeeyay in isaga loo dhar dhiganayo kadibna waxa uu dhamaan iska siibay dharkii uu qabay.
Isaga oo isku diyaariyay ayaa waxa uu dharbaaxi kala kulmay Haweeneydii nafteeda ku mashquulsaneyd, waxaana u suuragashay inuu wiisha uga dego Dabaqa qeybtiisa 4-aad oo uusan u socon.
Waxa uu degay isagoo dharkii Suudka ahaa gacanta ku wata, islamarkaana ahaa nin qaawan, waxa uu mar qura foodo iyo dhibaatooyin kala kulmay dadkii ku sugnaa Moolka oo loo soo ganacsi tago.
Waxa uu go’aansaday inuu iska dhigo ruux dhimirka ka xanuunsan waxa uuna bilaabay inuu adeegsado wajiyo cusub oo uu uga dhexbaxsan lahaa Moolka, hayeeshee waxaa mar labaad goobta ugu soo laabtay Haweeneydii oo cod dheer ku sheegtay inuu ku dhex damcay wiishka waxa ayna taasi sababtay in isaga oo qaawan jeelka la dhigo.
Ma uusan calfan damicii qaaday, balse waxa uu helay dharbaaxi uu kala kulmay Haweeneyda iyo fadeexo.